GỤỌ NKE Abkhaz Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Baoule Bashkir Batak (Toba) Belize Kriol Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Georgian German German Sign Language Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikamba Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Maya Mexican Sign Language Mingrelian Mongolian Moore Myanmar Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi (Shahmukhi) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Russian Sign Language Réunion Creole Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Quiatoni) Zulu
Mba, a gaghị ebibi ụwa anyị a, a gaghịkwa agba ya ọkụ, ma ọ bụkwanụ were ọzọ dochie ya. Baịbụl kwuru na Chineke kere ụwa ka e biri na ya ruo mgbe ebighị ebi.
“Ndị ezi omume ga-enweta ụwa, ha ga-ebikwa n’elu ya ruo mgbe ebighị ebi.”​​—⁠Abụ Ọma 37:⁠29.
“[Chineke] tọrọ ntọala ụwa mee ka o sie ike; ọ gaghị ama jijiji ruo mgbe ebighị ebi, ma ọ bụ ruo mgbe niile ebighị ebi.”​​—⁠Abụ Ọma 104:⁠5.
“Ụwa na-adịru ọbụna mgbe ebighị ebi.”​​—⁠Ekliziastis 1:⁠4.
‘Onye kpụrụ ụwa na Onye kere ya, Onye mere ka o guzosie ike, ekeghị ya n’efu, ọ kpụrụ ya ka e biri n’ime ya.’​​—⁠Aịzaya 45:⁠18.
Ụmụ mmadụ hà ga-ebibi ụwa?
Chineke agaghị ekwe ka ụmụ mmadụ jiri imebi ikuku na mmiri, agha, ma ọ bụkwanụ ihe ọ bụla ọzọ bibie ụwa kpamkpam. Kama, ọ ‘ga-ebibi ndị na-ebibi ụwa a.’ (Mkpughe 11:18) Olee otú Chineke ga-esi eme ya?
Chineke ga-eji Alaeze ya zuru okè nke ga-esi n’eluigwe na-achị ụwa dochie anya ọchịchị ụmụ mmadụ nke na-enwebeghi ike ichebe ụwa a. (Daniel 2:44; Matiu 6:​9, 10) Ọ bụ Ọkpara Chineke, bụ́ Jizọs Kraịst, ga na-achị n’Alaeze ahụ. (Aịzaya 9:​6, 7) Mgbe Jizọs nọ n’ụwa, o mere ihe ndị gosiri na ọ ga-achịkwali otú ihe ndị e kere eke si akpa ike. (Mak 4:​35-41) Ebe Jizọs bụ Eze nke Alaeze Chineke, ọ ga na-achị ụwa na ihe niile dị n’ime ya. Ọ ga-eme ka ihe niile dị ọhụrụ n’ụwa otú ha dị n’ogige Iden.​​—⁠Matiu 19:28; Luk 23:⁠43.
Baịbụl ó kwughị na a ga-agba ụwa a ọkụ?
Mba, o kwughị otú ahụ. Ihe na-emekarị ka ụfọdụ ndị chee otú ahụ bụ na ha na-aghọtahie ihe e kwuru na 2 Pita 3:⁠7. Ebe ahụ sịrị: “Eluigwe na ụwa dị ugbu a ka e debeere ọkụ.” Ka anyị tụlee ihe abụọ dị ezigbo mkpa ga-enyere anyị aka ịghọta ihe okwu ndị ahụ pụtara.
Na Baịbụl, e nwere ihe dị iche iche “eluigwe,” “ụwa,” na “ọkụ” nwere ike ịpụta. Dị ka ihe atụ, Jenesis 11:1 kwuru, sị: “Ụwa niile wee na-asụ otu asụsụ.” N’ebe a, “ụwa” pụtara ụmụ mmadụ.
Ihe a nọ na-ekwu tupu e kwuo ihe ahụ dị na 2 Pita 3:7 gosiri ihe eluigwe, ụwa, na ọkụ pụtara n’ebe ahụ. Amaokwu nke 5 na nke 6 gosiri na ihe ga-eme eluigwe na ụwa nke dị ugbu a ga-eyi ihe mere n’oge Iju Mmiri Noa. N’oge ahụ, e bibiri ụwa oge ochie, ma o nweghị ihe mere mbara ala anyị. Kama, Iju Mmiri ahụ bibiri ụmụ mmadụ ndị na-eme ihe ike. Ọ bụ ha bụ “ụwa” e bibiri. (Jenesis 6:​11) O bibikwara ihe e nwere ike ịkpọ “eluigwe” e nwere mgbe ahụ, ya bụ, ụmụ mmadụ chịrị ụwa n’oge ahụ. N’ihi ya, ihe e bibiri bụ ụmụ mmadụ na-eme ihe ọjọọ, ọ bụghị ụwa nkịtị. E bibighị Noa na ezinụlọ ya mgbe e bibiri ụwa oge ahụ. Ọ bụkwa n’ụwa ka ha ka bi mgbe Iju Mmiri ahụ gachara.​​—⁠Jenesis 8:​15-​18.
Mgbe a ga-ebibi ụwa nke dị ugbu a, nke “ọkụ” ahụ e kwuru okwu ya na 2 Pita 3:7 nọchiri anya ya, ọ bụ naanị ndị ọjọọ ka a ga-ebibi, o nweghị ihe ga-eme ụwa nkịtị anyị a otú ahụ ọ na-enweghị ihe mere ya mgbe e ji Iju Mmiri bibie ụwa n’oge Noa. Chineke kwere nkwa na a ga-enwe “eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ” nke ‘ezi omume ga-ebi n’ime ha.’ (2 Pita 3:​13) “Eluigwe ọhụrụ,” ma ọ bụ ọchịchị ọhụrụ, ya bụ, Alaeze Chineke ga-achị “ụwa ọhụrụ,” ma ọ bụ ụmụ mmadụ ọhụrụ bụ́ ndị ezi omume. Mgbe Alaeze ahụ ga-achịwa ụwa, ụwa ga-aghọ paradaịs ebe udo dị.​​—⁠Mkpughe 21:​1-4.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ À Ga-ebibi Ụwa?
ijwbq isiokwu 141